Ogaden News Agency (ONA) – Xaflad Lagu Khatimayay Quraanka Kariimka ah oo Lagu Qabtay Xerada Dhagaxley
Xaflad Lagu Khatimayay Quraanka Kariimka ah oo Lagu Qabtay Xerada Dhagaxley
Maanta oo khamiis ahayd taariikhduna y kubeegnayd 11/9/14 Waxaa xerada qoxootiga Dhagaxlay ee deegaanka Dhadhaab lagu qabtay xaflad aad ubalaadhan oo ay soo qaban qaabiyeen dalada culimaa-udiinka jaaliyada s.ogadenia ee bariga Africa. Xafladan ayaa ahayd mid lagu khatimayay qur’aanka kariimka ah oo in badan ay ku dhameeyeen xerada qoxootiga ee Dhagaxlay.
Guud ahaan ururka culimada jaaliyada bariga Africa gaar ahaan kuwa ka dhisan xeryaha qoxootiga Dhadhaab ayaa kujira dadaalo aad u balaadhan oo ay sijoogta ah u qabanayaan iyagoo adeegsanaya kartidooda iyo wixii uu Allaah S.W baray oo ay ugu adeegayaan shacab waynaha dulman ee ree Ogadenia. Dadaaladan ay culimadu qabato waxaa kamid ah dhalinta iyo dadwaynaha oo labaro diinta islaamka, kor uqaadista dhinaca tubta toosan oo ay bulshada kuwacyi galiyaan iyo akhris joogta ah oo ay kuhayaan qur’aanka kariimka ah.
Xafladan oo aad loosoo agaasimay sifiicana looga sooshaqeeyay ayaa qabsoontay abaare 10:00 subaxnimo waxaana sidii caadada ahayd lagu
furay aayado kamid ah qur’aanka kariimka ah iyo waxdi diini ah oo uusoo jeediyay sh cabdiraxmaan saxane sheekha ayaa sifaahfaasan usoo
jeediyay wacdi dheer oo dhinacyobadan taabanayay waxaana horay loo galay ajandayaashii xaflada. Waxaana goobta khudbad gaaban kasoo
jeediyay gudoomiya culimada ee xerada Dhagaxlay oo sifiican uga warbixiyay xafladan iyo waxa ay kusaabsantahay gudoomiyada culumada
sheekh Aadan ayaa sheegay in ay culimada akhriday qur’aanka kariimka ah 33 jeer taas oo ay maanta ufadhiyaan khatinkiisii. Wuxuu sheekhu
intaas kudaray in aysan joojinin akhriska qur’aanka oo ah hubka uguwayn ee loo adeegsado gumaysiga madow ee wadankeenii kuhabsaday.
Sheekha ayaa intaa ka dib kusoo dhaweeyay qaybaha bulshada oo ay xaflada kumarti qaadeen waxuuna kusoo dhaweeyay gudoomiya gudiga qoxootiga Ogadenia mudane cabdi maxamad gaaciye oo khudbad diiran madasha kasoo jeediyay isagoo kudhiiri galiyay in ay culimadu siilaban laabaan dadaalada joogtada ah ee ay wadaan isagoo muujiyay in ay garab taaganyihiin. Waxaa kaloo lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha Odayaasha ree Ogadenia ee kudhaqan xerada Dhagaxlay Saxane Xuseen, wuxuuna Odaygu sidiiran usoo dhaweeyay guud ahaan dadaalada ay dalada culimadu kawado guud ahaan bariga africa gaar ahaan xeryaha qoxootiga wuxuuna odaygu goobta kasoo jeediyay khudbad ay dadkii madasha fadhiyay kudiirsadeen.
Sidoo kale gudoomiyaha culimada ayaa kusoo dhaweeyay wafti kasocday dalada culimada waxaana khudbad qiimo badan soojeediyay sh xassan raage oo kamid ahgudida dalada.
Sikastaba ha ahaatee dalada culimada ee bariga Afrika ayaa wada dadaalo aad ubadan igasoo xero kasta iyo goobkasta oo ay kadhisan
yihiin akhriya qur’aanka. Guntoo iyo gaba gabadii shirka ayaa kusoo dhamaaday guul iyo wajiyo aad ufaraxsan wuxuuna soodhamaaday abaare